Akụkọ - Gịnị bụ nrụpụta resin IX?
N'ime otu okirikiri ọrụ ma ọ bụ karịa, resin IX ga -agwụ, nke pụtara na ọ nweghị ike ịkwalite mmeghachi omume mgbanwe ion. Nke a na -eme mgbe ion mmetọ na -ejikọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ saịtị niile na -arụ ọrụ na matriks resin. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịmụgharị bụ usoro ebe eweghachiri otu arụ ọrụ anionic ma ọ bụ cationic na matriks resin nọrọ. A na -emezu nke a site na iji ihe nrụpụta kemịkal, ọ bụ ezie na usoro ahụ kpọmkwem na ndị na -emegharị ya ga -adabere n'ọtụtụ ihe.
Ụdị usoro nrụpụta resin IX
Sistemụ IX na -ewerekarị ụdị ogidi nwere otu ụdị ma ọ bụ karịa resin. N'oge okirikiri ọrụ, a na -asọba mmiri n'ime kọlụm IX ebe ọ na -emeghachi omume na resin. Usoro okirikiri ọmụmụ nwere ike ịbụ otu n'ime ụdị abụọ, dabere n'ụzọ nke ihe mgbapụta ahụ na -ewe. Ndị a gụnyere:
1）Mweghachi mmekọrịta (CFR). Na CFR, ihe ngwọta ọhụrụ na -eso otu ụzọ ahụ ihe ngwọta a ga -esi gwọọ ya, nke na -adịkarị elu ruo na ala na kọlụm IX. A naghị ejikarị CFR mgbe nnukwu mmiri chọrọ ọgwụgwọ ma ọ bụ mkpa dị elu, maka cation acid siri ike (SAC) na akwa resin base anion (SBA) ebe ọ bụ na a ga -achọ nnukwu ihe ga -eme ka ọ dị ọhụrụ iji megharịa resin ahụ. Na -enweghị mmụba ọ bụla, resin nwere ike mịpụta ion na -efe efe n'ime iyi a na -emeso ya na ọsọ ọrụ ọzọ.
2）Reverse eruba regeneration (RFR). A makwaara dị ka mmụba mmiri na -asọgharị, RFR gụnyere ntụtụ nke ihe mgbapụta ahụ na ntụgharị ihu nke ọrụ ahụ. Nke a nwere ike ịpụta mbuli elu na -agbadata/na -agbadata ma ọ bụ na -agbadata na -agbadata/na -agbatị usoro okirikiri. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe ngwọta na -emegharị na -ebu ụzọ kpoo okpokoro resin na -adịghị ike nke ọma, na -eme ka usoro nrụpụta ahụ rụọ ọrụ nke ọma. N'ihi nke a, RFR na -achọ obere mmeghachi omume ma na -ebute mwepu nsị na -efe efe, n'agbanyeghị na ọ dị mkpa iburu n'uche na RFR na -arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na akwa resin na -anọ ebe niile n'oge ịmụgharị. Yabụ, ekwesịrị iji RFR naanị na ogidi IX juru n'ọnụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ejiri ụdị njigide iji gbochie resin ahụ ịbanye n'ime kọlụm ahụ.
Nzọụkwụ ndị gụnyere nrụpụta resin IX
Nzọụkwụ ndị bụ isi n'usoro okirikiri nwere ihe ndị a:
Azụ azụ. A na -eme nkwado azụ na CFR naanị, ọ gụnyere ịsachasị resin iji wepu ihe siri ike kwụsịtụrụ ma kesasịa chaplet resacted. Mgbakasị nke beads na -enyere aka wepu irighiri ihe na nkwụnye ọ bụla dị mma site na resin.
Ntughari ogwu. A na -etinye ihe nrụpụta ihe n'ime kọlụm IX n'obere ọnụego iji nye oge kọntaktị zuru oke na resin. Usoro mmegharị ahụ dị mgbagwoju anya maka nkeji akwa agwakọtara ọnụ nke nwere ma anion na resin cation. N'ihe ndina akwa IX, dịka ọmụmaatụ, a na -ebu ụzọ kewaa resin, emesịa tinye ihe nrụpụta caustic, ihe nrụpụta acid na -esochi ya.
Nweghari mweghachi. A na -eji nwayọọ nwayọọ ewepụta onye na -emegharị ahụ site na iwebata mmiri dilution, nke na -abụkarị n'otu usoro mgbapụta dị ka ihe mgbapụta. Maka nkeji akwa agwakọtara ọnụ, a na -enwe ebe a na -akwagharị mgbe etinyere nke ọ bụla n'ime ihe ngwọta ọhụrụ, a na -agwakọtakwa resins na ikuku ma ọ bụ nitrogen. A ga -ejikwa nlezianya jikwaa ọnụego usoro nke “nwayọ nwayọ” a ka ọ ghara imebi beads resin.
Itucha. N'ikpeazụ, a na -eji mmiri na -asachapụ resin ahụ ka ọ na -eru ka okirikiri ọrụ. Usoro ịgba nchacha kwesịrị ịga n'ihu ruo mgbe iru ogo ebumnobi nke ebum n'obi.
Kedu ihe eji eme maka nrụpụta resin IX?
Ụdị resin ọ bụla na -akpọ maka otu warara nke nwere ike ịmaliteghachi kemịkal. N'ebe a, anyị edepụtala usoro mmeghachi omume a na -ahụkarị site n'ụdị resin, ma chịkọta usoro ndị ọzọ ebe ọ dị.
Ntughari acid siri ike (SAC)
Enwere ike iji resin SAC megharịa ya naanị na acid siri ike. Sodium chloride (NaCl) bụ ihe a na -ahụkarị maka ime ka ngwa dị nro, ebe ọ dị ọnụ ala ma dịkwa ngwa. Potassium chloride (KCl) bụ ihe a na -ahụkarị na NaCl mgbe sodium adịghị mma na ọgwụgwọ ọgwụgwọ, ebe ammonium chloride (NH4Cl) na -anọchikarị maka ngwa nro condensate dị ọkụ.
Demineralization bụ usoro ụzọ abụọ, nke mbụ gụnyere iwepu cations site na iji resin SAC. Hydrochloric acid (HCl) bụ ihe na-emegharị nke ọma na nke ejiri mee ihe maka ngwa decationization. Sulfuric acid (H2SO4), ebe ọ bụ ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa na nke na -adịchaghị ize ndụ na HCl, nwere ikike ịrụ ọrụ dị ala, ọ nwere ike ibute mmiri ozuzo calcium sulphate ma ọ bụrụ na etinyere ya na oke oke.
Ndị na -ewepụta ihe na -adịghị ike acid (WAC)
HCl bụ ihe na -adịchaghị mma, na -emegharị nke ọma maka ngwa okwu mkparị. Enwere ike iji H2SO4 dị ka ihe ọzọ na HCl, n'agbanyeghị na a ga -edobe ya nke ọma iji zere ọdịda calcium sulphate. Nhọrọ ndị ọzọ gụnyere asịd na -adịghị ike, dị ka acetic acid (CH3COOH) ma ọ bụ citric acid, nke a na -ejikwa emegharị resins WAC mgbe ụfọdụ.
Ndị na -emegharị ihe ike siri ike (SBA)
Enwere ike weghachite resin SBA naanị na ntọala siri ike. A na -ejikarị caustic soda (NaOH) eme ihe dị ka onye na -emegharị SBA maka imebi ihe. A pụkwara iji potash caustic, n'agbanyeghị na ọ dị oke ọnụ.
Resin Base Anion (WBA) resins
NaOH ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ka a na -eji emegharị WBA, n'agbanyeghị na enwere ike iji alkalis na -esighị ike, dịka amonia (NH3), sodium carbonate (Na2CO3), ma ọ bụ nkwụsịtụ wayo.